September, 20 2015 ( Radio Baidoa) Waxaa si rasmi ah Magaalada Baydhaba ee Gobalka Bay ka bilowday olole nadaafadee oo la doonayo in kor looga qaado bilicda magaaladaasi.
Munaasbad lagu daah furayey Ololaha sare u qaadida bilicda ayaa ka dhacday magaalada Baydhaba, waxaana kasoo qeyb galay gudomiyaha Gobalka Bay, kan degmada Baydhaba, gudoomiyaasha xaafadaha magaaladaasi iyo shacabka ku dhaqan degmadaasi.
Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed gudomiyaha gobalka Baay ayaa goobta ka hadlay, wuxuna sheegey in qorshahan uu yahay mid aad u wanaagsan oo bilicda magaalada wax loogu qabanay, shacabka magaaladaasi looga baahanyahy in ay ka qeyb qaataan Olalahaasi.
Godomiya waxaa kaloo tilmaamey in mashruucan uu soconayo muddo bil ah oo lagu doonayo in shacabka ay tijaabiyaan kaalintooda ku aadan olalhaa magaalada.
Sidokale Olalahan soo nooleynta bilicda magaalada Baydhaba bar bar socda, dib u dayactirka qaar kamid ah wadooyinka magalada Baydhaba oo burbursan, iyadoo guud ahaan la doonayo in la dhiso wadooyinka iyo bilicda magaalada.